DAGAAL culus oo dib uga qarxay duleedka Beledweyne | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii DAGAAL culus oo dib uga qarxay duleedka Beledweyne
DAGAAL culus oo dib uga qarxay duleedka Beledweyne
Beledweyne (Dalkaan.com) – Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goordhow uu dagaal dib uga qarxay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi, kaas oo u dhexeeyo ciidamada HirShabelle iyo kuwa kale oo taabacsan sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiisha haatan kasoo horjeedo maamulka.
Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu yimid, kadib markii ciidamada HirShabelle oo kaashaanaya kuwa dowladda, gaar ahaan qeynta 27-aad ee Xoogga dalka ay weerar ku qaadeen fariisiin ay ciidamada sarkaalkaasi ka sameysteen duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada, waxaanka halkaasi haatan ka socda iska hor imaad u dhexeeyo labada dhinac.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa innoo sheegay in dagaalka xooggiisa uu ka socdo deegaanka Qowlad, isla-markaana la’isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kal duwan.
Ma cadda illaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan, waxaana weli rasaas xoogan laga maqlayaa duleedka Beledweyne.
Dagaalkan ayaa daba socda iska hor imaad habeenkii Jimcaha ka dhacay Beledweyne, kadib markii la weeraray kolonyo uu la socday guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte.
Guddoomiyaha oo ka hadlay xiisaddaas ayaa hanjabaad u diray saraakiisha kasoo horjeeda HirShabelle ee ku sugan Beledweyne, wuxuuna sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan amniga, sidoo kalena ay ka hortagi doonaan dadka liddiga ku ah nabad-gelyada.
Dhanka kale waxaa magaalada Beledweyne haatan ka billowday dibad-bax rabashada wata oo ay dhigayaa bulshada deegaanka, kuwaas oo kasoo horjeeda weerarka lagu qaaday sarkaal Nuure oo ka mid ahaa saraakiishii la baxay bad-baadada Hiiraan.
Dibad-baxayaasha ayaa sidoo kale ku qeylinayo erayo ka dhan HirShabelle, waxaaya dhagxaan iyo biro ay ku gooyeen qaar ka mid ah waddooyinka magaalada.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayo dagaalka oo saameeyn dadka deegaanka.
I Liga: FC Porto vs SC Braga Porto, 01/17/2020 - Futebol Clube do Porto welcomed Sporting Clube de Braga tonight in a match...
Cali Guudlaawe oo kulan la yeeshay Fahad Yaasiin + Sawirro
Mahdi M Guuleed ayaa si lama filaan ah oga hadlay arinta...
Ciidamada TIGRAY ee Itoobiya oo magan-gelyo weydiistay SUUDAAN
Wararkii ugu dambeeyey ee shahaado siinta xildhibaanada
Rooble oo war ka soo saaray doorashadii maanta
Arrin uu sameeyey wasiirka arirmaha dibedda Pakistan oo caro ka dhalisay...
Ciidamada KENYA oo lagu eedeeyey dilka 167 qof